Yimiphi imibala ethopha kakhulu lapho ugqoka owesilisa | Amadoda aSitayela
Gqoka ngesitayela bese uhlanganisa imibala ukuthi bathanda akuwona umsebenzi onzima. Kepha uma ufuna ukuyazi kuqala lapha singakunikeza ukuthi imiphi imibala yibo abaphatha kahle kakhulu uma kukhulunywa ngokugqoka indoda.
Kufanele ugcine engqondweni ukuthi ithoni yesikhumba ingasiza ukukhetha lowo mbala ozobukeka ungcono kunomunye, kepha ungasheshi ukubeka lowo mbala ngoba. Imibala nayo kuzohlobene nesikhathi nendawo lapho bezobukisa khona.
1 Yimiphi imibala ethopha kakhulu lapho ugqoka?
2.1 Amathoni esikhumba alungile
2.2 Amathoni esikhumba amnyama
3 Umbala wezingubo zakho ngokwesikhathi sonyaka
3.1 Imibala yezingubo ebusika
3.2 Imibala yezingubo ehlobo
Yimiphi imibala ethopha kakhulu lapho ugqoka?
Hlala ukhumbula lokho imibala iyinkinga yomuntu siqu nokuthi nguwe kuphela ongazi ukuthi iziphi ezizizwa zihamba phambili. Ukuze ukwazi ukugqoka induduzo kufanele inqobe Lapho uyikhetha, awusoze wazi ukuthi umbala noma ingubo izokufanela kanjani uze uzame. Lawa amathiphu angakusiza, kepha futhi singabuyekeza imibala elingana kahle kakhulu.
Njengomthetho ojwayelekile, imibala emihle kakhulu futhi ezivame kakhulu ezimhlophe, ezimnyama, ezimpunga kanye nezikhakhi. Yimibala eyisisekelo futhi ehlangana kahle kakhulu nomunye umbala, ngakho-ke, akufanele ilahleke ekhabetheni lakho lezingubo.
Imibala egqamile ibalulekile futhi futhi eziningi zazo zinhle kakhulu, ikakhulukazi uma ziyimibala efashisayo yaleyo nkathi. Umbala we-salmon, opinki, ophuzi, o-emerald oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka, i-hippie, ibhishi noma amaHawaii… Ingabe yilezo ezisetha izitayela, kungaba ezokugqoka noma ezemidlalo kanye nokuthi kufanele ugqoke uma uthanda, kodwa ngendlela enokuqonda okuningi.
Ngokungangabazeki, umbala wengubo uyiqiniso noma isimo somuntu uqobo ukuthi kufanele bazizwe behehwa ngumuntu, kufanele kukhanyise ubuso bakho. Ungahle uthande umbala futhi ungazizwa ukuthi leyo nkinga, noma kunjalo, ngokubheka abanye, lowo ngumbala ofanelana kahle nawe. Ngokuya ngethoni yesikhumba sakho Ungahlanganisa ezinye izingubo nezinye futhi kulokhu sizokukhombisa ngezansi:
Amathoni esikhumba alungile
Imibala ehambisana kahle nesikhumba esimhlophe noma esikhanyayo imibala emnyama. Phakathi kwabo sinezisekelo ezifana omnyama, okuhlale kuyindlela engcono kakhulu futhi egqoke kakhulu. Okuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, namathoni amnyama ebanga le-l oluhlaza, obomvu, onsomi futhi onsundu. Imibala ekhanyayo nayo ibukeka kahle, ngaphandle kokuphuzi. Phakathi kwazo, beige nomhlopheYize eyokugcina isabukeka ingcono kakhulu kumathoni wesikhumba amnyama.
Amathoni esikhumba amnyama
Izikhumba ezimnyama zilungele ukuhlanganisa imibala yanoma yiluphi uhlobo. Uma kunemibala emnyama, kufanele kuqashelwe ukuthi bangamaka izici zobuso kakhulu. Zibukeka zihle njalo imibala empunga, oluhlaza okhakhi, oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka omnyama kakhulu ubukeka umuhle, kepha ngeke ugqamise okuningi komuntu, futhi akufanele ubheje ku i-shades yekhofi ensundu noma ama-purple.
Umbala wezingubo zakho ngokwesikhathi sonyaka
Okunye okugqamile umbala kuya ngesizini yonyaka: ngokuvamile ehlobo noma ebusika. Siyaqhubeka nokwabelana ngamathoni akuthandayo kuye ngethoni yesikhumba sakho nokuthi uzosebenza kanye nezeluleko zangaphambilini.
Imibala yezingubo ebusika
Amathoni nemibala evelele kakhulu kule sizini yimibala eyisisekelo, kufaka phakathi i- okumhlophe, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okumnyama nokumnyama grey. Zingahlala zixubekile futhi ziqondaniswe. Khetha lezo zingafanelana nombala wamehlo wakho nombala wezinwele. Ngokuya ngemfashini evelele ngalowo nyaka, kuzofanele usebenzise umbala wokusetha umkhuba, kuhlale kunombala okhanyayo ogqamile futhi ungawuhlanganisa nanoma yimiphi imibala eyisisekelo.
Imibala yezingubo ehlobo
Imibala esetshenziswe futhi iyona eyisisekelo. Babukeka behle kakhulu ukugqoka umbala okumhlophe, okuluhlaza okwesibhakabhaka okuthena amalahle, okumpunga okukhanyayo nokumnyama, kepha lokhu kwenzeka kuphela ngezikhathi ezithile. Eminye imibala ongayisebenzisa yileyo egqokwa ngaleyo nkathi, kuhlale kunombala ogqamile ngokuba umbala ogqamile noma ogqamile. Zivela ku-turquoise, okugqamile okuluhlaza, okuphuzi kuyo yonke imibala yayo kanye ne-lilac noma okusajingijolo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi inkinga yemibala ibaluleke kakhulu, kepha akumele senze ihaba ngayo inhlanganisela eqhumayo yazo, njalo kufanele funa ukuvumelana. Kunconywa ukuthi uhlale ubheka leyo mibala esitolo esisodwa bese uyazama, ngale ndlela wenza isiqiniseko sokuthi yini efanele ithoni yesikhumba sakho, umbala wezinwele, umbala wamehlo kanye neminyaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Yimiphi imibala ethopha kakhulu lapho ugqoka owesilisa